ASUS ZenBook Duo: Akwụkwọ ederede ihu abụọ site na ọdịnihu | Akụkọ akụrụngwa
Anyị na-alaghachi na nyocha anyị na kọmpụta nkeonwe, anyị enwebeghị otu ọkọlọtọ na tebụl nyocha anyị ruo ogologo oge, yabụ echere m na nke a bụ oge dị mma. Anyị nwere ngwaahịa nke mepụtara ọtụtụ atụmanya n'oge mmalite ya, ọ bụkwa ntụgharị nke ịghasa na arụpụta ihe na ihe niile anyị hụgoro. Anyị nwalere nke ọhụrụ ASUS ZenBook Duo, laptọọpụ nwere ihuenyo abụọ yiri ka ọ ga-abịa site n ’ọdịnihu. N’ezie, ụdị ngwaahịa ndị a nwere ike ime ka anyị rụpụtakwu ọrụ nke ọma, ị cheghị?
Dị ka anyị na-emekarị, anyị esoro nyocha a miri emi na vidiyo maka ọwa YouTube anyị nke ị ga - ahụ etu ASUS ZenBook Duo si eme na oge. M na-adụ gị ọdụ ka ị lee anya n'ihi na n'ụzọ ahụ ị nwere ike ịlele unboxing ma were ohere ịdenye aha na ọwa anyị.
3 Njikọ njikọ na nnwere onwe
4 Ihuenyo abụọ na pensụl dị ka ihe ngosi
5 Omume niile na oriri ọtụtụ
ASUS kpebisiri ike imepụta ihe ọhụrụ, itinye ihe egwu, ihe ndị nrụpụta laptọọpụ na-eyighị ka ha chọrọ ime, na ntinye doro anya na laptọọpụ ọdịnala ma ọ bụ ozugbo na ndị na-agbanwe agbanwe. Nke a ZenBook Duo na-ewegharị nke ịghasa, na-ewepụta ụdị ejiji nke ndị na-agbanwe agbanwe ma na-eme ka ihe ngosi ọdịnala ahụ dị mma na akwụkwọ akụkọ na-atọ ụtọ. Nke ahụ emeela ka anyị chọta laptọọpụ nke dị ka ebe ọrụ, yana ụfọdụ usoro 323 x 233 x 19,9mm, nke na-adịchaghị kọmpat.
Ngwunye anyị na-acha akwụkwọ ndụ na-adọrọ adọrọ. Anyị nwere sistemụ na-enweghị amị amị na ala nke na-e leatheromi akpụkpọ anụ ma bụrụ padded, ị nwere ike ịhụ nkọwa na nkenke na mwube laptọọpụ a nke anyị nwere ike ịgụnye n'ime oke elu. Anyị nwere ngụkọta ịdị arọ nke 1,5 n'arọ, ya mere n’agbanyeghi na ibu ya buru ezigbo ibu, o yighị ka ọ bụ nsogbu nye ụgbọ njem ya kwa ụbọchị.
Dị ka anyị kwuru, nke a ASUS ZenBook Duo na-achọ ịbụ ebe ọrụ, ọ bụ ya mere ha ji kpebie ịga maka ngwaike egosiri na arụmọrụ dị elu. Ya mere, anyị nwere processor Intel ọgbọ nke iri Isi i7 (i7-10510U). Execrụ ọrụ ndị a na-esonyere ya na 16GB nke ebe nchekwa DDR3 RAM na 2133 MHz nke, na-enweghị ịbụ "kachasị" n'ahịa, na-enye ezigbo arụmọrụ. Maka akụkụ ya, gosipụtara nchekwa ahụ, 512 GB PCIe nke atọ nke nyere anyị ihe 1600 MB / s nke ịgụ na 850 MB / s ederede, dị elu nke ukwuu ma mee n'ezie ka ngwaọrụ ahụ na-ebugharị dị ka ikuku.
Na usoro nke njikọta adịghị anya n'azụ, anyị nzọ na WiFi 6 Gig +, Ọ bụ ezie na n'ule ndị ahụ enyego nkwụsi ike, a na-atụ uche m n'ihe ọzọ, echere m na o metụtara ọnọdụ antennas ahụ. Anyị n'otu n'otu nwere Bluetooth 5.0 maka nnyefe faịlụ wireless yana ntinye ngwa. Njikọ ndị ahụ adịghị, ebe anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri zuru oke nke anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa.
Njikọ njikọ na nnwere onwe
Anyị na-amalite site na obodo kwụụrụ onwe anyị, anyị nwere batrị nke 70Wh nke nwere mkpụrụ ndụ Li-Po anọ. Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ otu n'ime ụkpụrụ agbakwunyere ya, anyị na-ahụ otu ụbọchị ọrụ dị mfe iji chee ihu na-apụ kpamkpam site na ntanetị eletrik (gburugburu 8h nke nnwere onwe nyere anyị ule). O doro anya na nke a bụ ihe kachasị mma n'echiche m nyere ya na laptọọpụ "kpochapụwo" ma rụọ ọrụ. O doro anya na ojiji nke ihuenyo nke abụọ ma ọ bụ arụmọrụ nke kaadị eserese ga-enwe ọtụtụ ihe ikwu banyere obodo kwụụrụ.
O juru m anya na ha adịghị nzọ na USB-C dị ka usoro ịkwụ ụgwọ, agbanyeghị, ọdụ ọdụ ụgbọ mmiri anaghị efu na ngwaọrụ a:
2 x USB-A ọdụ ụgbọ mmiri
3,5mm Jack Na / Ọpụpụ
MicroSD kaadị agụ
N'ezie ezu, Anọ m na-akụ nzọ na HDMI dịka ọdụ ụgbọ mmiri dị oke mkpa maka laptọọpụ niile ọ dị ka ASUS ka doro anya na nke ahụ.
Ihuenyo abụọ na pensụl dị ka ihe ngosi
Anyị nwere ngalaba mbụ nke 14 sentimita asatọ na okpokolo agba ole na-arụ ọrụ na mkpebi FullHD (1080p) nke Pantone kwadoro na sRGB. Ihuenyo a na-enye nchapụta dị mma na ezigbo mma na mkpuchi matte na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ n'ọnọdụ ọjọọ. Ihuenyo bụ otu n'ime ihe kachasị mma na nyocha anyị.
Anyị na-aga n'ihu na obere ihuenyo nke 12,6 sentimita asatọ ma o doro anya na ultra sara mbara, oke nke inch n'etiti otu na nke ọzọ abughi onye nnochite anya. Ihuenyo a nwere ihu ọma ya karịa nke kachasị elu. Ọ dị mma ma dakọtara na pen nke gụnyere, a ga-eji nke a mee ihe na desktọọpụ agbatị ọ bụ ezie na anyị nwere ike iji ozi ọma dị na ngwanrọ ASUS gbakwunye ụzọ mkpirisi, ihe mgbako na ngalaba ndị ọzọ na-adọrọ mmasị nke ga-eme ka arụ ọrụ anyị dị elu. Nwee ike idezi foto, idezi vidiyo ma ọ bụ rụọ ọrụ na ọtụtụ akwụkwọ n'otu oge na ASUS ZenBook Duo a bụ ezigbo obi ụtọ.
Banyere pensụl, n'eziokwu emechabeghị m eme ya. Ọ bụghị ìhè na ọfụfụ jiri iji mkpịsị aka gị na-emekọrịta ihuenyo mmetụ. Echere m na ọ bụ ngwaahịa agbakwunyere nke ga-adọta ndị ọzọ na niches ndị ọrụ. Ngwa ọ bụla adịghị emerụ ahụ.
Omume niile na oriri ọtụtụ
Ndị na-ekwu okwu na-esonye aka site n'aka Harman Kardon na igwe okwu ya nwere ndakọrịta Cortana na Alexa n'ụzọ agbakwunyere. Ke adianade do, anyị chọrọ ka a mata kamera Iye ihe mmetụta nke ahụ ga - enyere anyị aka ịmata onwe anyị wee nweta ọtụtụ ngwaahịa. Nke ahụ kwuru, anyị na-ahụ ike mgbasa ozi dị iche iche nyere ogo nke ihuenyo na ụda ahụ, nke a doro anya na nnukwu na nnukwu mpịakọta, anyị ahụghị mkpọtụ ma anyị nwere ike ịsị na ọ bụ otu n'ime ndị na-ekwu okwu kachasị mma anyị hụrụ na laptọọpụ.
Maka akụkụ ya, na usoro arụmọrụ, anyị doro anya na ịkụ nzọ na kaadị eserese dị ike ma ọ bụ nke ugbu a ga-emeperịrị ọnụ ụzọ ma ọ garaghị ịta ọnụ ahịa ahụ karịa. Emeputaghi ya ka igwu egwu, mana o ghaziri idezi oyuyo di nma, mana m gaara acho ihe ozo di iche na onu ahia a. N'akụkụ aka nke ọzọ kiiboodu nwere njem dị ukwuu na ìhè azụ mana imewe nke siri ike ịmegharị, yana oke na ọnọdụ nke oke ahụ na-amanye gị ịkụ nzọ na oke mpụga.
ASUS ZenBook Duo a dị site na euro 1499 na isi ire ere, ị nwere ike ịzụta ya EGO ya na nkwa kachasị.
Nzọ dị na ihuenyo abụọ na laptọọpụ ọdịnala na-amasị m
Nnwere onwe dị ukwuu na enweghị ọdụ ụgbọ mmiri dị mkpa
Ezigbo SSD na RAM iji kwekọọ ọnụahịa ahụ
Ahụmịhe multimedia na-enye afọ ojuju
Echere m na ha kwesiri ịga maka Kaadị eserese dị elu
Ngosipụta dị nha enweghi nchapụta
Emebeghi pensụl ahụ nke ọma
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » ASUS ZenBook Duo: Laptọọpụ ihuenyo abụọ site na ọdịnihu
Xiaomi Mi Ezi Ikuku ntị ntị 2, nyocha miri emi